Tag: naqshad ux | Martech Zone
Tag: naqshad ux
Waqti ka dib, rajooyinka laga qabo degellada internetka ayaa is beddelay. Rajooyinkani waxay dejinayaan heerarka sida loo farsameeyo khibrada isticmaale ee degel ay bixiso. Iyada oo rabitaanka matoorada raadinta ay bixiyaan natiijooyinka ugu habboon uguna qanacsan ee raadinta, qodobo darajo ah ayaa tixgelin la siiyaa. Mid ka mid ah maalmahan ugu muhiimsan waa waayo-aragnimada isticmaale (iyo waxyaabo kala duwan oo goobta ka qayb qaata.). Sidaa darteed, waa la ogaan karaa in UX ay muhiim tahay
2017 Naqshadeynta Webka iyo Isbedelada Khibrada Isticmaalaha
Isniin, Janaayo 23, 2017 Isniin, Janaayo 23, 2017 Douglas Karr
Runtii waan ku raaxaysanay qaabkeenii hore ee Martech laakiin waan ognahay inay umuuqatay da 'yar. In kasta oo ay shaqeynaysay, haddana ma aysan helin soo-booqdeyaal cusub sidii markii horeba. Waxaan rumeysanahay inay dadku yimaadeen goobta, waxay u maleeyeen inay waxyar ka dambeyso qaabeynteeda - waxayna sameeyeen fikrad ah in waxyaabaha ku jira ay sidoo kale noqon karaan. Si fudud haddii loo dhigo, waxaan dhalanay ilmo fool xun. Waan jeclaanay ilmahaas, si adag ayaan u shaqeynay